Inona avy ireo toetra tena manan-danja amin'ny teny keyword Amazon mba ho fantatry ny olona rehetra mivarotra any?
Raha lazaina tsotra, ny teny filamatra Amazôna dia matetika mitovy karazana fangatahana fikarohana nataon'ireo mpampiasa mandehandeha ao amin'ny baran'ny Google. Vokatr'izany dia hahita ny pejy manokana na ny lisitry ny lisitry ny lisitra aseho amin'ny fidirana amin'ny fikarohana sasantsasany. Ary ny maha-zava-dehibe ny fikarakarana ny fikarohana fikarohana fototra dia efa fantatry ny ankamaroan'ny webmasters sy ny mpandraharaha an-tserasera, farafaharatsiny ireo izay mihazakazaka fivarotana fandefasana entana amin'ny fifanakalozam-bola, na tranokala fananganana tranokala. Tsy azo lazaina fa ny SEOs efa nahazo alalana dia efa noraisina ho toy izany - ny votoatiny dia ny mpanjaka mandrakariva, raha ny fanatsarana ny fitadiavana. Ary ny fisafidianana ny teny ifaneraserana, miaraka amin'ny fampiasana azy ireo amin'ny sehatra ara-barotra, dia ny mety ho fahombiazan'ny tetikasa maoderina rehetra amin'ny aterineto, izay tsy misy fanararaotana. Izany no mahatonga ahy manaiky ireo mpivarotra milaza fa rehefa mahaliana ny teny malaza Amazon, ny fikarohana lalina dia mandany ampahany 80% ho an'ny ezaka manerantany, fa ny sisa amin'ny asa sisa tavela dia zavatra eo amin'ny 20% fotsiny.
Ny teny manokana sy sarobidy indrindra Amazôna
Nalaina tamin'ny ankapobeny, ny teny fanoratana volamena dia natao ho anisan'ireo lohandriana sarobidy hita tao amin'ny arsenal an'ny ecommerce rehetra nahomby mpivarotra. Mazava ho azy, raha toa ka mahira-tsaina tokoa ny mpandraharaha amin'ny aterineto mba hahafantarana azy indray mandeha ary ho an'ny rehetra - ny teny fototra volamena dia tena manosika ny fifanakalozan-dresaka avoakany. Marina tokoa, ireo teny fototra ireo dia andrasana hamerina azy ireo amin'ny farany. Ireto ny tokony ho fantatrao momba ireo singa manan-danja efatra.
Ireo singa efatra amin'ny ambaratonga fototra Golden Amazon
Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny teny fanoratana volamena dia natao ho afaka mandidy ny habetsaky ny fivezivezen'ny fikarohana amin'ny lisitry ny vokatrao. Mariho anefa fa ny teny tadiavina dia tokony mbola hanana ny toeran'ny fifaninanana araka ny tokony ho izy - mba hahafahanao mametraka azy ireo ho mazoto. Etsy andaniny, ny teny fototra volamena rehetra dia tokony hanana toetra ara-barotra matanjaka ka mahatonga ny ankamaroan'ireo mpanjifany tsy manam-paharoa farany mandany vola amin'ny faran'ny diany ho lasa mpividy tena.
Search Boky - azo jerena miaraka amin'ilay Google Keyword Planner tsara taloha. Ity fitaovana ity angamba no safidy tsotra indrindra hanombohana ny fikarohana ny fomba amam-panao Amazon indrindra.
- Fanamafisana ny fifaninanana - dia tokony handamina amin'ny antsipiriany amin'ny tanana, raha ny mpifaninana ihany koa dia azo jerena miaraka amin'ny rindrambaiko manokana an-tserasera amin'ny fitaovana rindrambaiko toy ny Long Tail Pro, ny mpandraharaha mavitrika, na ny Jungle Scout. Izy rehetra dia ampy tsara mba hanampy anao amin'ny asa. Noho izany, afa-tsy aminao ihany ny olona manandrana voalohany.
Search Intent - dia midika fa ny volavolam-pitenenan'ny volavolam-pikarohana ambany dia mety hitondra lanjany bebe kokoa, ka mety ho matanjaka kokoa noho ny tombon-tsoa hafa, fa tsy ny tenimiafina Amazon hafa miaraka amin'ny fikarohana tsaratsara kokoa.
Fehezan-dalàna momba ny famolavolana - dia matetika ampiasaina amin'ny mpanjifa mety manakaiky ny fanapahan-kevitra farany hividianana. Ohatra, alohan'ny handao ny singa voafidy amin'ny sarimihetsika, ny ankamaroantsika indraindray dia manamarina izany indray, amin'ity indray mitoraka ity dia mampifanaraka ny fangatahana fikarohana taloha miaraka amin'ny sasany amin'ireo teny mahazatra toy ny "tsara indrindra", "ambony indrindra", " kalitao "," aiza no hividianako "," tsara indrindra ", sns Source .